2010-05-09 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
manual proxy ​အ​သစ်​လေး​များ
​ဘာ Program ​မှ ​ခံ​သုံး​စ​ရာ ​မ​လို​ပါ . (freedom ​နှင့်​အ​ခြား​သော program ​များ​ကို​ဆို​လို​သည်)
Tools >> options >> advanced ​ကို ​သွား​ပြီး Network ​ကို ​ရွေး​လိုက်​ပါ .
setting ​ကို ​ရွေး​ပါ .
(4)​ကြောင်း​မြောက်​က manual proxy configuration: ​စာ​ကြောင်း​ရဲ့ ​အောက်​မှာ ​ရှိ​တဲ့ HTTP Proxy : ​နဲ့ Port: ​အ​ကွက်​မှာ ​အ​ခု​ပေး​ထား​တဲ့ proxy no. ​နဲ့ Port ​ကို ​သာ​ထည့်​လိုက်​ပါ .
​ဘာ software ​မှ ​ခံ​စ​ရာ​မ​လို​တော့​ပါ​ဘူး . ​အ​ဆင်​ပြေ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော် ​ဖျား​နေ​လို့ ​ဘာ​ပို့စ်​မှ ​မ​တင်​နိုင်​တဲ့​အ​တွက် ​စိတ်​မ​ကောင်း​ပါ​ဘူး . ​အား​လုံး​အ​ဆင်​ပြေ ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော့် ​ညီ​လေး ​မြင့်​ဇော်​ကို​လဲ ​ကျွန်​တော့်​လို​ပဲ ​အ​ကူ​အ​ညီ​တောင်း​ပြီး ​မေးလ်​ပို့​မေး​လို့​ရ​သ​လို ​လို​ချင်​တဲ့ software ​တွေ​လဲ ​သူ့​ဆီ​မှာ ​တောင်း​လို့​ရ​ပါ​တယ် .